ललितपुरमा केटाकेटामै सिन्दुर हालेर विहेः पण्डित आश्चर्यमा, फेसबुकमा लभ परेको थियो « Mayadevi Online News Portal
ललितपुरमा केटाकेटामै सिन्दुर हालेर विहेः पण्डित आश्चर्यमा, फेसबुकमा लभ परेको थियो
प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०७७ शुक्रबार १९:१०
समाचारको शीर्षक पढेपछि तपाईलाई कौतुहल लाग्यो होला । केटा केटाको पनि बिहे ? त्यो पनि नेपालमा ? विदेशमा केटा–केटा वा केटी–केटीबीच बिहे भएकोबारे तपाईले कतै पढ्नु सुन्नु भएकै थियो होला । नेपालमा पहिलोपटक धार्मिक विधि अनुसार केटा केटाको नै बिहे भएको छ । यो समाचार लेख्दै गर्दा बेहुली बनेका केटा आफ्ना केटा श्रीमानको घरमा भित्रिइसकेका छन् ।
यस्तो बिहे शुक्रबार ललितपुरको कुपण्डोलमा भएको हो । रामेछाप घर भई हाल काठमाडौं थानकोट बस्ने सौरभ तामाङ (बेहुला) ले झापाका सुरज खत्री (बेहुली) लाई सिन्दुर हालेर बिहे गरेका हुन् । सौरभले सिन्दुर मात्र हालेनन्, बिहेको जग्गेमा मंगलसुत्र पनि पहिर्याइदिएका छन् । जसरी बिहे मण्डपमा केटा र केटीबीच बिधिपूर्वक बिहे हुन्छ उनीहरुले पनि बिधि पुर्याएर बिहे गरेका हुन् ।
उनले भने–‘आजको दिनमा हल्का खुसी पनि छु, हल्का नर्भस पनि छु, आज सबैभन्दा मैले मेरो बहिनीलाई सम्झिरहेको छु । किनभने बहिनीले मलाई कहिले पनि स्वीकार गर्नुभएन् । म अलिकति दुःखी पनि छु । बहिनीले इग्नोर गरेको कुराले दुःख लाग्छ तर ममी साथमा हुनुहुन्छ, मलाई यो भन्दा के चाहियो । चेलीबेटी भनेको दाजुभाईसँग रिसाइहाल्छ फेरि बोलिहाल्छ त्यही आशामा छु । आमाले बुहारी भनेर अपनाईसकेपछि एकदिन भाउजु भनेर कसो नअपनाउला ? ’
बिहेपछि संस्थाका कार्यक्रम संयोजक मनोरञ्जन बैद्यले सरकारले छिटै समलिङ्गी बिवाहलाई मान्यता दिने कानून बनाउन आग्रह गरे । मानिसले आफ्नो लिङ्गअनुसार व्यवहार गर्न पाउने भन्ने सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा गरेको फैसलाअनुसार समलिङ्गीहरु सँगै बस्ने तथा बिहे गर्ने गरेको उनले बताए । बिहेपछि बेहुली बनेका सुरजले अरु ‘गे’हरु पनि खुलेर बाहिर आउनुपर्ने बताए । साथै समाजलाई पनि स्वीकार गर्न आग्रह गरे । उनीहरुले उनीहरुको बिहेलाई कानूनी मान्यता दिन सरकारलाई पनि आग्रह गरे । यसअघि समलिङ्गी पुरुष सुरेन्द्र र तेश्रोलिङ्गी महिला राम गुरुङ (माया) ले बिहे गरेपनि नेपालमा समलिङ्गी केटा केटाबीच भने यो पहिलो बिहे भएको हो ।